ဖေဖေါ်ဝါရီလအတွက် မန်းဂဇက်ချစ်သူများစာပေဆု နှင့် ရွာ့ဘုရားပွဲ.(Final Result).Best Web Awards | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Best Web Awards » ဖေဖေါ်ဝါရီလအတွက် မန်းဂဇက်ချစ်သူများစာပေဆု နှင့် ရွာ့ဘုရားပွဲ.(Final Result).Best Web Awards
ဖေဖေါ်ဝါရီလအတွက် မန်းဂဇက်ချစ်သူများစာပေဆု နှင့် ရွာ့ဘုရားပွဲ.(Final Result).Best Web Awards
Posted by အရင်ကကျော်စွာဦးကြီးမိုက် on Mar 8, 2013 in Best Web Awards, Creative Writing, Myanmar Gazette | 76 comments
မန်းဂဇက် ချစ်သူများ စာပေဆု။ လက်ဝှေ့ပြိုင်ပွဲကြီး ကြီးမိုက်ဆိုတာ
မန်းဂဇက်ဆိုတဲ့ရွာကြီး က ဒီရက်ပိုင်းအတွင်းထူးထူးခြားခြား လှုပ်လှုပ်ရွရွ နဲ့
မန်းဂဇက်ရွာ ဆိုလို့ လူတော်တော်များများက သိပ်တိတိပပသိသေးကြပုံမရဘူး…
ကာလသားဂေါင်း..ကျုပ်က အမြဲ `နီပေပါ´လို့ ချစ်စနိုး ခေါ်လေ့ရှိတဲ့.
ကျွှန်တော်တို့ ရွာကြီးတွင် …….
ဘူဇွာ၊ အရင်းရှင်၊ ခရိုနီ များမရှိပါ
ဈေးမီးရှို့သူများမရှိပါ။ ကလေးလုပ်သားများ ပြောင်းရွှေ့အလုပ်သမားများ ဆင်းရဲမွဲတေသူများမရှိပါ။
ဒုစရိုက်မှု၊ မူးယစ်ဆေးဝါး၊ ကပ်ဘေးဒုက္ခများ မရှိပါ။ စသဖြင့် …. ဘာဆိုဘာမျှ စိတ်ညစ်စရာများမရှိပါ…….။(ဖဲဝိုင်း၊ အရက်ဝိုင်း၊ ဘောလုံးလောင်းကစားဒိုင်များကတော့
သဂျီး ကိုယ်တိုင်ဝါသနာ ပါလွန်း၍ ခွင့်ပြုထားသဖြင့်..ရှိပါသည်။ဤကား စကားချပ်။)
ကုန်သွယ်ရေးအတွက်( ကုန်သည်ပွဲစားများ၊ ပွဲရုံပိုင်ရှင်များ၊ စက်ရုံအလုပ်ရုံပိုင်ရှင်များ)
ခရီးသွားလာရေးအတွက် (ဟိုတယ်ပိုင်ရှင်များ၊ တိုးကုမ်ပဏီများ၊ တိုးဂိုက်များ)
ဖျော်ဖြေရေးအတွက် ( ဇာတ်မင်းသား မင်းသမီးများ၊ သီချင်းရေး/ဆိုသူများ၊ စာရေးဆရာများ၊ ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်သူများ၊ ကဗျာဆရာများ၊ အယ်ဒီတာများ၊ ဓာတ်ပုံဆရာများ အစရှိသဖြင့် များစွာမှီတင်းနေထိုင်ကြကာ သင့်မြတ်မျှတစွာ(တစ်ခါတစ်ခါ ထချကြရင် တလလောက်ကြာတာကလွဲလို့) ရှိနေပါသည်။ထို့ကြောင့် ကျွန်တော်တို့ရွာကြီးတွင် ဆေးရုံ၊ဆေးခန်း၊ စာသင်ကျောင်း၊ နိူင်ငံရေးအဆောက်အအုံ၊ တရားရုံး၊ သမိုင်းအဆောက်အအုံ၊ အားကစားကွင်း၊ ပန်းခြံ၊ရေကန်၊ ဟိုတယ်များ အပန်းဖြေလေ့လာစရာများ အင်ဖော်မေးရှင်းတက်ကနိူလိုဂျီစခန်းများ ပြည့်စုံစွာ ရှိနေပြီး ဖြစ်ပါသည်။
(ခွက်ဒစ်တူ- ရဲစည်။http://myanmargazette.net/168502/society-lifestyle )
(ရွာ့အကြောင်းသရုပ်ဖေါ်တာကြိုက်လွန်းလို့ ယူသုံးတာ ခွင့်လွှတ်ပါ နီပေပါ ရေ..
ခွင့်မလွှတ်လည်း သိပ်တော့ သောက်ဂရုမစိုက်ပါဘူး…ဟီး ဟိ)
ဤကား မန်းဂဇက်ဆိုသောရွာကြီး၏ သရုပ်သဏ္ဍာန် အကြမ်း ပေးတည်း…..
ရွာကြီး အထူးတလည် လှုပ်ရှားနေရတဲ့အကြောင်းကလည်း ရှိပေတာကိုး…ဗျ
အဲဒီအကြောင်းကတော့ ရွာဦးကျောင်းနားမှာတည်ထားကိုးကွယ်ကြတဲ့ ရွာရဲ့
တစ်ဆူတည်းသော တန်ခိုးကြီးဘုရား ကိုးန၀င်းစေတီတော်ကြီးရဲ့…
တစ်နှစ်တစ်ခါကျင်းပလေ့ရှိတဲ့ ဗုဒ်ဓပူဇနိယ ဘုရားပွဲတော်ကြီးကို လာမဲ့ တပေါင်းလပြည့်နေ့
ဖြစ်နေကြရတာပါ…ပိုပြီးထူးခြားတာက ခါတိုင်းနှစ်များနဲ့မတူပဲ…ဒီနှစ်မှ တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်
ပြီးခဲ့တဲ့ ၈ လလောက်က စပြီး လစဉ်ဆုရွေးချယ်ပြီး ၆ လ တစ်ကြိမ် ဆုပေးဖို့ စီစဉ်ခဲ့တဲ့ အမေဒိကားပြန် သဂျီးမင်းရဲ့ မန်းလေးဂဇက်ဆိုတဲ့ ၀က်ဆိုဒ်မှာ စာရေးနေသူများထဲက စာဖတ်သူများအကြိုက်(ဖတ်ရွေးအဖွဲ့ဝင်များအကြိုက်)
`မန်းဂဇက်ချစ်သူများစာပေဆု´(2013 ခုနှစ် ဖေဖေါ်ဝါရီလအတွက်)လည်း အဲဒီနေ့မှာပဲဘယ်သူဆုရတယ်ဆိုတာကြေငြာပေးမှာမို့ပဲ…
အရင်အုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့ သူကြီးမင်း `ဦးကိုင်ဘွား´ ဆိုတဲ့လူက လူတော်လူကောင်းကြီးပါ..ဒါပေမဲ့
အသက်အရွယ် တော်တော်ထောက်လာတော့ ကျေးရွာကိစ္စတွေမှာသိပ်အားကျိုးမာန်တက်
ဟိုး ငယ်ငယ်လေးကတည်းက ဦးလေးတွေနဲ့လိုက်ပီး
အမေဒိကားမှာ နှစ်သုံးဆယ်လောက်သွားနေသူ သားကြီးသြရသ `ဦးခိုင်´ဆိုသူကို
မြန်မာပြည်ပြန်လာပီး သူ့အမွေတွေကိုဆက်ခံဖို့နဲ့ သူဂျီးမင်းတာဝန် ဆက်ထမ်းဆောင်ဖို့
အတင်းမရမနေခေါ်လို့ လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်လောက်က ပြန်ရောက်လာပါပကောလား…
သူလာတာရိုးရိုးမဟုတ်ဘူးဗျို့..သူနဲ့အတူ အင်တာနက်ဆိုတဲ့ ပညာရပ်တွေပါသယ်လာ..
အမတ်ဒိန် စတဲ့ ထရိန်နာငါးယောက်လက်ရွေးစဉ်ရွေး၊ သင်တန်းအနီးကပ်ပေး…
ကျေးရွာ စာကြည့်တိုက်အတွက် ကွန်ပြူတာတွေဝယ်..ဆင်ပေး..
လူငယ်အချို့သာစိတ်ဝင်စားကြပေမဲ့ နောက်ပိုင်းကျတော့..ကျုပ်တို့လို လူကြီးတွေပါမနေနိုင်မထိုင်နိုင် သင်ဖြစ်တော့တာကိုး….အဲ..အားလုံးလည်း
မန်းလေးဂဇက်ဆိုတဲ့ဝက်ဆိုဒ်မှာလည်း စာမရေးရမနေနိုင်၊ ဓါတ်ပုံမတင်ရမနေနိုင် ကွန်မင့်လေးမှမပေးရမနေနိုင်ဖြစ်နေကြပြီ..ဘိန်းစွဲသလိုစွဲနေကြပီဆိုပါတော့…
လား..လား..ဒီတော့မှ နိုင်ငံတကာက ဘစ်ဇနက်တွေလေ့လာတတ်ကျွမ်းခဲ့တဲ့
သဂျီးက ဇတ်လမ်းစတော့တာ…အပေါ်က သူ့အမာခံထရိန်နာတွေကို
တစ်နာရီ လေးရာကျပ်နှုံးတဲ့…´ လုပ်ပုံလုပ်ပုံ…
တလျှောက်လုံးအလကားသုံးခဲ့ရတာကိုး…လူလယ် သဂျီးက လည်း
၀န်ဆောင်ခက ရေရှည်ဘယ်လိုပေးမလဲ.ခင်ဗျားတို့ရေးနေတဲ့ မန်းဂဇက်ဝက်ဆိုဒ်ဆာဗာဖိုးက ဘယ်သူပေးမလဲ….ရပ်ရွာတိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးရေးကိုဘာနဲ့လုပ်ကြမလဲ…အခုတောင် ကျုပ်ကမြင်းတောင်ထပြီး အင်တာနက်ကို ရွာနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးလိုက်တာ ကျုပ် အမေဒိကားမှာ နှစ်ပေါင်းများစွာ အငတ်ခံပြီး စုလာခဲ့သမျှ ဒေါ်လှတွေ တော်တော်ပြောင်သွားလို့
ကျုပ်မိန်မ ကျုပ်ကို အိမ်ကနှင်ချနေပြီဗျ..´
၀က်ဆိုဒ်ကြီးမှာ စာရေးကောင်းသူတွေ ပိုမိုများပြားလာအောင် ဆွဲဆောင်တဲ့
အနေနဲ့ စာပေဆုလေးလစဉ်ပေးကြဖို့ အဆိုတင်သူကတင်လာပြန်တယ်…
အဆိုတင်လာသူကတော့ ဂဇက်ရွာတံခါးစောင့်ကြီးတို့ ..ရွာသူားတွေကို ချိုပေါ့ကျ ပုံမှန်တိုက်သူအဖြစ်ဒီဝက်ဆိုဒ်ှ်မှာ ကျော်ကြားတဲ့…`“တွံတေး ဘလက်ချော”ပါပဲ…
(သူက လက်ဝှေ့ကျော်တစ်ဦးလည်းဖြစ်ပေသကိုး..တွံတေးသိန်းတန် တို့ တွံတေးစိုးအောင်တို့ မွေးဇာတိဖြစ်တဲ့ တွံတေးသား။..လက်ဝှေ့လောကမှာ နာမည်တစ်လုံးရပီးမှ..ဒီ ဂဇက်
ခေါင်းချင်းရိုက် တိုင်ပင်ကြပြီး ..ရွေးတာတော့ဟုတ်ပါပြီ…ဘယ်လို စည်းကမ်းချက်တွေနဲ့
ရွေးမှာလည်းဆိုတာကရှိသေး…ဒီတော့ ရွာ့အရေးအမြဲရှေ့ကပါလေ့ရှိတဲ့ ဦးဦးပါလေရာက..
ဒီအချိန်မှာ…ကထူးဆန်းက…ဟိုး..ဟိုး..ဟိုး..ဦးပါ..ခင်ဗျားဒီလိုပြောသွားတော့ဘယ်သူက လုံးစေ့ပါတ်စေ့မှတ်မိမှာလဲဗျ…ဆိုတော့…ဟုတ်ပီ..ဒါဆို ကျုပ်မနက်ဖန်မနက် စောစော
အဲဒီအပေါ်မှာလိုတာထပ်ဆွေးနွေးကြပေါ့…တဲ့…အားလုံးးအကြမ်းဖြင်း အားဖြင့် ဦးပါပြောတာသဘောတူကြပြီး..ဒီနေ့အဖို့ ဒီလောက်ပဲဆိုပီး လူချင်းခွဲခဲ့ကြတယ်…
တော်တော်သွက်တဲ့ဦးပါ…အားလုံးဖတ်ပီးဦးပါလေရာရဲ့ အရည်အချင်းနဲ့ ရွာ့အပေါ်ထားတဲ့စေတနာကို..လက်ဖျားခါသွားကြရပါရဲ့….(ဥပဒေတစ်ခုကို တစ်နှစ်နဲ့အပီးမသတ်နိုင်တဲ့ ခုခေတ် ကျင်းပနေတဲ့
အဓိကမူဝါဒ ကြီး၆ချက်နဲ့ စည်းမျဉ်းနဲ့ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း အချက်၂၀ကျော် ပါဝင်တဲ့ အင်မတန်ရှည်လျှားပြီး တိကျလှတဲ့
“ မန်းဂေဇက်ချစ်သူများစာပေဆု ရွေးချယ်ရေးအဖွဲ့
မူဝါဒ၊ စည်းမျဉ်း နှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ”
ဆိုတဲ့ စာတန်းကြီးကို ၀ိုင်းဖတ်ပြီး ပြည့်စုံနေတာကြောင့် အတည်ပြုလိုက်ကြပါတယ်…။
အဲဒီထဲက မှတ်သားစရာအချက်တစ်ခုကတော့ .. ရွေးချယ်ရေးစည်းမျဉ်း အပိုဒ်၃-(ဆ)
(ဆ) ရွေးချယ်ပြီးနောက် အမှတ်အများဆုံးရသူ တစ်ဦးထက်ပိုလျှင်- အမှတ်အများဆုံးရသူများတွင် ရွေးချယ်ရေးအဖွဲ့ဝင်များပါဝင်ပါက ရွေးချယ်ရေးအဖွဲ့ဝင်များကို ပယ်ရမည်။
ဘယ်လောက် အသေးစိတ်ကျသလဲလို့ ဒီစာပေဆုကိုကရော်ကမယ်ဆောင်ရွက်ခဲ့တာ
ဒီနေရာမှာ….မန်းဂဇက်ချစ်သူများစာပေဆုပေးပွဲ ဖြစ်လာအောင် စတင်စိတ်ကူးပြီး အဆိုတင်သွင်းခဲ့တဲ့ “တွံတေး ဘလက်ချော”နဲ့ စိတ်ရှည်လက်ရှည် ကိုယ်ပိုင်အချိန်တွေပေးပီး
ကျေးဇူးတင်ကြောင်း အထူးမှတ်တမ်းတင် ဖေါ်ပြ လိုပါတယ်……
အဲဒီစည်းမျဉ်း စည်းကမ်းတွေလည်းဖတ်ပီးရော…တစ်ယောက်ကစောဒက တက်တယ်…
`ဆု´ `ဆု´ `ဆု´
ဒီကိစ္စက သဂျီးကစတာမဟုတ်ဘူး…ပီးတော့ သဂျီးက ကပ်စေးနဲကြီး..ဟီးးး
အခု သူစမိတ်ဆက် ပေးခဲ့တဲ့ အင်တာနက်တောင် အလကားမသုံးရတော့ဘူး…
အဲဒီအချိန်မှာ…မင်းသမီးကြီး ဒေါ်ပဒုမ္မာ က စပြောတယ်…
ဖတ်ရွေးအဖွဲ့ဝင်တွေ တစ်ယောက် တစ်လကို..၃၀၀၀ စီထည့်ရမယ်..
ကျမတို့ ဖတ်ရွေး ၉ယောက်က တစ်လ ၃၀၀၀ စီ နဲ့ ၆လတွက် ၁၈၀၀၀ ဆိုတော့ ၁၆၂၀၀၀ ရမှာပေါ့…ပြောရင်းနဲ့ ဖတ်ရွေးအဖွဲ့ ၀င်အဖြစ် အရွေးခံထားရသူတွေကိုမျက်လုံးငဲ့ကြည့်လိုက်တော့..ဖတ်ရွေးအဖွဲ့ဝင်တွေက
အဘဆွေ နဲ့ ကိုအက်ဖ်အာ၊ က တစ်လ ၁၀၀၀၀ စီနဲ့ ၆လတွက် ၆၀၀၀၀ ဆိုတော့ ၁၂၀၀၀၀
(အဘဆွေက အပြောမဟုတ်..တစ်နှစ်စာ ၁၂၀၀၀၀ ကို သူနေထိုင်ရာ ဘိလပ်ကနေ ချက်ချင်းပို့လိုက်ပါတယ်)
ဆိုတော့..အခုတင်…၂၈၂၀၀၀ ရသွားပီပေါ့….အင်းဒီလောက်ဆို ဆုပေးပွဲအစီအစဉ်ဖြစ်သွားပီပေါ့….
နောက်ဆုံးတစ်ခု ကျန်နေသေးဗျာ….ဆုပေးပွဲဆိုကတည်းက တွေ့ဆုံပွဲပါ ပါလာပီဆိုတော့..
ဒီအတွက်လည်း…ရွာထဲက သဘောင်္ဒရိုင်ဘာကြီး ကိုအက်ဖ်အာကပဲ…ဧည့်ခံစရိတ်နဲ့ နေရာ
ဒါပေမဲ့…အဖွဲ့ဝင်အားလုံးက..တစ်ဦးတည်းတာဝန်ယူတာတော့ များလွန်းပါတယ်လို့သုံးသပ်ကြပြီး..ကောက်ခံလို့ရတဲ့ ရံပုံငွေထဲကတစ်ဝက်ခံမယ်..
ကျန်တဲ့တစ်ဝက်ကိုတော့ ကိုအက်ဖ်အာ ပေးတာကိုလက်ခံတာပေါ့လို့ ဆုံးဖြတ်ကြတယ်..
အဲဒီလိုနဲ့ `မန်းဂေဇက်ချစ်သူများစာပေဆု´ ရွေးချယ်ခဲ့ကြပီး..ပထမ ၆လ အတွက်
ဆုပေးပွဲကြီးကိုတောင် ဒီနှစ် ဇန္န၀ါရီလ၂၀ရက်နေ့ကအောင်မြင်စွာ
ကျင်းပနိုင်ခဲ့ပါပြီကောဗျာ……..ဒီနေရာမှာ..ပုံမှန်လစဉ်ငွေထည့်ကြတဲ့ ဖတ်ရွေးအဖွဲ့ဝင်များအားလုံးနဲ့…အထူးတလည် ငွေရေးကြေးရေးပါဝင်ကူညီခဲ့ကြတဲ့
အဘဆွေ နဲ့ အဘဖေါ (ခေါ်) Foreign Resident တို့ နှစ်ဦးကိုလည်း တစ်ရွာလုံး
ပြီးခဲ့တဲ့ ၆ လအတွက် ဆုပေးပွဲနဲ့တွေ့ဆုံပွဲ
နောက်ထူးခြားတာတစ်ခုကတော့ မြန်မာ့ ရိုးရာလက်ဝှေ့စိန်ခေါ်ပွဲကြီးပါထည့်ထားလို့
တစ်ရွာလုံးပိုပီး စိတ်ဝင်စားနေကြပါသဗျာ…နေ့ခင်းစာအတွက်ကတော့ တစ်ရွာလုံးမီးခိုးတိတ်..
ရွာ့မိရွာ့ဖလည်းဖြစ် ရွာရဲ့ လယ်ပိုင်ရှင်သူဋ္ဌေးကြီးနှစ်ယောက်လည်းဖြစ်တဲ့ဦးဦးပါလေရာ နဲ့
ဦးဆာမိတို့က `၀ါဆိုထမင်း´ နဲ့ တစ်ရွာလုံးကိုဧည့်ခံကျွေးမွေးမတဲ့…လေးစားလောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်
အဲ..ညပိုင်းကျတော့လည်း..ရွာသူခေါင်းဆောင်မင်းသမီးကြီး `လေဘာတီပဒုမ္မာ´နဲ့ ဇတ်ဆရာကြီး အဘဆွေတို့ဦးစီးတည်ထောင်ထားတဲ့..မန်းဂဇက်အငြိမ့်အဖွဲ့ကြီးက
ဘိလပ် လို့ ကျုပ်တို့ခေါ်ကြတဲ့ အင်္ဂလန်နိုင်ငံကြီးမှာ..ဆာဘားနပ်ချောတို့ ရှိတ်စပီးယားတို့ ရေးတဲ့ပြဇတ်တွေ
ရုံတင်ကပြတာကို နှစ်ပေါင်းများစွာ အနီးကပ်လေ့လာသင်ယူခဲ့တာကလား…
နောက်ပိုင်းကမဲ့ဇတ်အတွက် သမိုင်းနောက်ခံဝတ္ထုကိုလည်း သမိုင်းပညာမှာဝါရင့်
တဲ့ ဆရာစံလှကြီးကိုတိုင်ရေးဆိုပဲ…ခေါင်းဆောင်မင်းသမီးကြီ ပဒုမ္မာဆိုတာကလည်း
အနုပညာမှာ မျိုးနဲ့ရိုးနဲ့ …တချိန်က နိုင်ငံတ၀ှမ်း လျှမ်းလျှမ်းတောက်နာမည်ကြီးခဲ့တဲ့ မင်းသမီးကြီးလေဘာတီမမြရင်ရဲ့ မြေးအရင်းခေါက်ခေါက် …ဆိုတော့…အတိုင်းထက်အလွန် တံခွန်နဲ့ကုက္ကား…. ဘာလိုသေးလည်းပေါ့ဗျာ….
မင်းသမီးကြီး လေဘာတီပဒုမ္မာရဲ့ အကနဲ့အလှ
ဇတ်ဆရာ အဘဆွေ နဲ့အဖွဲ့ ဇတ်တိုက်နေစဉ်
မင်းသမီးကြီးလေဘာတီပဒုမ္မာနဲ့အတူ ပါဝင်ကပြကြမဲ့ ရွာသူချောများ
.လုပ်ငန်းသဘောအရပါ..နိုင်ငံရပ်ခြားရောက်နေကြသူ ရွာသူားများဖြစ်ကြတဲ့…ကိုသစ်မင်း၊ အရီးခင်လတ်၊ ကိုကြောင်ကြီး၊ကိုကိုကြောင့် ပါရမီဖက် ကြေးမုံဂျီး၊ ကိုအောင်၊ ကိုရင်မောင်၊ အဘဆွေ၊ ကိုကျောက်ခဲ၊ ကိုအက်ဖ်အာ၊ ကဖုန်းကျော်၊ မိုက်ကယ်ဂျော်နီအောင်ပု၊ ကိုရင်ရှုံး၊ ခိုင်ဇာ၊ ရွှေကြည်၊ မိုချို၊ မောင့်ကျက်သရေဂီ…ကရင်စည်သူ၊ ကရဲစည်..
စတဲ့ ..စတဲ့ ရွာသူားဟောင်းတွေလည်းနေရပ်ဋ္ဌာနီပြန်လာကြတဲ့ အပြင် မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့
ခြေဆန့်နေကြသူတွေပါ…ရွာပြန်လာကြတာမို့လို့ ရွာကြီးဟာ အုံးအုံးထလို့နေတာပေကိုး…
ဒီလိုခမ်းနားလှပြီးပျော်စရာကောင်းမဲ့ ပွဲတော်ကြီး အောင်အောင်မြင်မြင်ခြိမ့်ခြိမ့်သဲ
ကျင်းပနိုင်ရေးအတွက်…ဒီမိုသဂျီး ဦးခိုင်က ရွာဦးကျောင်းဆရာတော် ဦးပဇင်း ဇောက်ထိုး
ကိုအမှုးထားပြီး ပွဲတော်မတိုင်မီ နှစ်ပါတ်လောက်ကတည်းက ရွာလုံးကျွတ်အစည်းအဝေး
ခေါ်ယူပြီး ပွဲတော် အတွက် တာဝန်တွေ ပေးပါလေရောဗျို့…ဒီလို..ဒီလိုတွေ…
ဒီပါကို၊ ကိုလင်းဝေ၊ နိုဇိုမိ
သီတာစိုး၊ အေကေကေအို၊ ကိုခင်ခ၊ ကိုထက်ဝေး၊ မိုချို
ကိုပေါက်(မန်း)၊ လုင်၊ ဆြာအုပ်၊ကိုစိန်သော့၊ ရွှေမင်းသား
လျှပ်စစ်မီးဖက်ဆိုင်ရာ နှင့် အင်တာနက်တာဝန်(ကမ္ဘာကိုဖြန့်ရန်)
စွယ်တော်ရွက်၊ အံစာတုံး၊ ပေါက်ဖေါ်(ဗိုက်ကလေး)
အက်ဖ်အာ၊ ကြောင်ကြီး၊ ကိုရှုံး၊ ကိုရင်မောင်၊ ကိုကျောက်ခဲ၊ ကိုအဏ်ဏ၀ါ
ကမ်းကြီး၊ အာဂ၊ နွယ်ပင်၊ သူရဇော်
ကထူးဆန်း၊ ဂျော်နီဒီးယား၊ ကိုဆာမိ၊ လမင်းကဗျာ၊ လုံမလေးမွန်မွန်၊ ကိုနွေဦး
မဝေ၊ မအိ၊ မမ၊ မနိုဗွီ၊ ခိုင်ဇာ၊ အီးတုံး
မောင်ပေ၊ မိုဘိုင်း၊ မျိုးသန့်၊ ကိုအောင်၊ ဘဲဥ၊ ဖရဲသီး
ကျေပွန်အောင် အစွမ်းကုန်ဆောင်ရွက်ပေးကြလိမ့်မယ်လို့ ကျနော်ယုံကြည်ပါတယ်..
အစီအစဉ်အားလုံး လပြည့်နေ့မတိုင်ခင် ညနေဖက်မှာ အဆင့်သင့်ဖြစ်ပါစေ..
အဲအဲ..မေ့တော့မလို့…ဒီလိုဗျ…ပွဲတော်စမဲ့ မနက် ၈နာရီကစပြီး မြန်မာ့ရိုးရာလက်ဝှေ့
ပြိုင်ပွဲအရင်စဖွင့်မယ်…၈နာရီကနေ ၁၀နာရီအတွင်းတော့ ရွာထဲက လက်ဝှေ့ဝါသနာရှင်တွေရဲ့
အလွတ်တန်းပြိုင်ပွဲလေးတွေပေါ့…မနက်၁၀နာရီ၁၅မိနစ်ကနေ ၁၁နာရီထိ ၄၅မိနစ်ကတော့
စိန်ခေါ်သူလက်ရှိချန်ပီယံ “တွံတေး ဘလက်ချော”နဲ့ ချန်ပီယံလုဖို့ ထိုးသတ်မဲ့ `တောင်လှေကားကြီးမိုက်´တို့ရဲ့ အထူးပွဲကြီးကိုကျင်းပမှာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေး…
ဒီလိုနဲ့..ပွဲတော်ရက်လည်းတဖြည်းဖြည်းနီးလာပြီး… တစ်ရွာလုံး ကိုယ့်အလုပ်နဲ့ကိုယ်ရှုပ်နေကြလေရဲ့…….
ဒီနေ့တော့ ကြီးမိုက်တစ်ယောက် မနက်လေးနာရီလောက်ထဲက အိပ်ယာထပြီးနေပီ
အိပ်ယာကနိုးတာနဲ့ မျက်နှာကမန်းကတမ်းသစ်..ရေ နှစ်ဖန်ခွက်လောက်သောက်ပြီး
အိမ်ရှေ့ သရက်ပင်ကြီးအောက်က မြေသားပြောင်ပြောင်ကွက်လပ်ကလေးမှာ..နေရာယူပြီး
ကြီးမိုက်ငယ်ငယ်က ကော့သောင်းက ယိုးဒယားနယ်စပ်မှာ အဖေနဲ့လိုက်ပြီး နှစ်တော်တော်ကြာကြာနေခဲ့ဖူးတယ်..အဲဒီမှာနေရင်း အဖေ့မိတ်ဆွေ ပလျူးလူမျိုး
“အုပေါင်” ဆိုတဲ့ လက်ဝှေ့ဆရာကြီးနဲ့ ခင်မင်ရင်းနှီခွင့်ရခဲ့ပါတယ်..သူက ကျနော့ကို
ယိုးဒယားလက်ဝှေ့သင်ပေးခဲ့တယ်…သူ့ဆီမှာ ၆လ လောက်သင်ပီးတာနဲ့
အဲဒီခေတ်က ကျေးရွာဘုရားပွဲတွေမှာ အမြဲပါလေ့ရှိခဲ့တဲ့ မြန်မာ့ရိုးရာ လက်ဝှေ့ပြိုင်ပွဲတွေမှာ
ဒါပေမဲ့ ဆရာကြီးအုပေါင် ကတော့ ရှုံးလာတဲ့အခါတိုင်း…ပွဲစဉ်ကိုပြန်သုံးသပ်ပြပြီး
ကြီးမိုက်ရဲ့အားနည်းချက်တွေကို ထောက်ပြပြီး အပြင်းအထန်ပြန်လေ့ကျင့်စေခဲ့တယ်…
ဒီလိုနဲ့ ၃နှစ်လောက်အကြာ..ကြီးမိုက် ၁၆နှစ်သားလောက်မှာ အဲဒီနယ်တစ်ဝိုက်
ရွယ်တူ တန်းတူတွေကြားမှာ ကြီးမိုက်ကိုယှဉ်ထိုးသတ်နိုင်သူမရှိသလောက်ဖြစ်လာခဲ့တယ်..~
နောက်တော့ ကြီးမိုက်အဖေ အလုပ်ပြောင်းရတာနဲ့ ဆရာကြီးအုပေါင်နဲ့ အဲဒီနယ်ကို
စွန့်ခွါခဲ့ရတယ်လေ….ဒီလိုနဲ့ အဖေ့အလုပ်ပြောင်းရာနောက်လိုက်နေရင်း စာလည်းသင်
ရောက်ရာအရပ် ဘုရားပွဲတွေက လက်ဝှေ့ အလံလုပွဲတွေ လည်းဝင်ဝင်ထိုးလေ့ရှိတော့
ထူးခြားတာက ဆရာရင်းအုပေါင်ရဲ့ အကောင်းဆုံး ပွဲသိမ်းတိုက်ကွက်ဖြစ်တဲ့
တစ်ဖက်လူရဲ့ မသိမသာညွတ်ထားတဲ့ဒူးခေါင်းပေါ်ကို ဘယ်ခြေနဲ့ဖြတ်ကနဲ
လျှပ်ပျက်သလို ခုန်တက်ပီး ညာဒူးနဲ့ တစ်ဖက်လူရဲ့ မေးရိုးကိုပစ်ဆောင့်လိုက်တဲ့တိုက်ကွက်ပဲ..
ဒီနေ့ဒီအချိန်မှာတော့ ကြီးမိုက်လည်း အသက်ကရလာတော့ သိပ်မထိုးဖြစ်တော့ပါဘူး..
ဒါပေမဲ့ စိန်ခေါ်လာရင်တော့ တိမ်ပေါ်ထိ လိုက်ထိုးတတ်တဲ့ တောင်လှေခါးကြီးမိုက်
ဆိုတော့ အခုရွာ့နှစ်ပါတ်လည်နေ့ ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲနဲ့ ဟောဒီဂဇက်ရွာကြီးရဲ့ လက်ဝှေ့
သရဖူလုပွဲကြီးမှာ တစ်ဖက်ကစိန်ခေါ်လာတဲ့ “တွံတေး ဘလက်ချော”ရဲ့ စိန်ခေါ်ချက်ကို
ဒါပေမဲ့ ကြားထားရသလောက်ကတော့ သူလည်းခေသူတော့မဟုတ်ဘူးဗျ…
တစ်ချက်တစ်ချက် ရုတ်တရက်ရွာကနေ အကြာကြီးပျောက်ပျောက်သွားတတ်တယ်…
သွားတာမှမဟုတ်တာ..ဒါပေမဲ့လို့ ရွာမှာအပ်ကျတာကအစသိသိနေတဲ့ ဆယ်အိမ်ခေါင်း
“ရွှေတိုက်စိုး”ကို သူကြိုက်တဲ့ အံစာတုံးရဲ့ ထန်းတောက ပင်ကျရေလေးတိုက်ပီး နှိုက်မေးလိုက်တော့ အကြောင်းစုံသိရသပ..ဟာဟ..
တစ်ခါတစ်ခါ ယိုးဒယားဘက်တောင် သွားသင်သတဲ့….အင်း..ဒီနေ့တော့
ကြီးမိုက် လည်းသွေးပူလေ့ကျင့်ခန်းလေးပီးတာနဲ့ သရက်ပင်မှာချိတ်ဆွဲထားတဲ့
ဟုတ်တယ်လေ..သူ့ရဲ့ ထူးခြားတဲ့ တိုက်ကွက်တွေ တစ်ဖက်လူမြင်လို့ဘယ်ဖြစ်ပါ့မလဲ နော့..
မနက် ၇ နာရီခွဲကတည်းက အခမ်းအနားမှုး ရွှေတိုက်စိုးနဲ့ အမတ်မင်းတို့က တစ်လှည့်စီ အခမ်းအနားအစီအစဉ်များကိုကြေငြာပေးနေပါတယ်…
မျှော်လင့်တကြီး စောင့်စားကြည့်ရှုနေတဲ့ ရွာ့ပရိပ်သပ်
စိန်ခေါ်သူ.. “တွံတေး ဘလက်ချော” နဲ့ ..“တောင်လှေခါးကြီးမိုက်”တို့ရဲ့ ချံပီယံလုပွဲ
ကြိုးဝိုင်းအောက်က ဆိုင်းဝိုင်းတာဝန်ယူထားတဲ့.. ရွာစားကျော်မင်းနန္ဒ ဆိုင်းဝိုင်းကလည်း
မြူးမြူးကြွကြွ ဘိန်းမောင်းတိုက်ပေးနေပါတယ်… အခမ်းအနားမှတ်တမ်းတင် တာဝန်ယူထား
ကြတဲ့ ကိုပေါက်(မန္တလေး) ဦးဆောင်တဲ့ ကင်မရာမင်းတွေကလည်း ရှု့ထောင့်မျိုးစုံကနေရာယူ
ကြိုးဝိုင်းပေါ် ပထမဆုံးတက်ပီးဟန်ရေးပြသူကတော့ “တွံတေး ဘလက်ချော”ပါပဲ..
သူဟန်ရေး အတန်ကြာပြပြီးတော့..ကြိုးဝိုင်းပေါ်ကို ..“တောင်လှေခါးကြီးမိုက်”တက်လာပါတယ်..အပေါ်ရောက်တာနဲ့ ပရိပ်သတ်ကို လှည့်ပါတ်
အဲဒီအချိန်မှာပဲ.ကြိုးဝိုင်းဒိုင် တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ မိုက်ကယ်ဂျော်နီအောင်ပု က .ပြိုင်ဖက်နှစ်ဦးကို
မကြာခင်လေးမှာပဲ..ကိုကြောင်ကြီးက ပွဲစ ခေါင်းလောင်းကိုအထိုး..ကိုအောင်ပုက
ပထမတော့ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် အရမ်းမ၀င်သေးပဲ ကြိုးဝိုင်းထဲမှာလှည့်ပါတ် အကွက်ရှာနေကြပါတယ်…စလှုပ်ရှားလိုက်သူက ကြီးမိုက်ပါ..
ရှောင်ချိန်မရလိုက်တဲ့ ကြီးမိုက်နံဘေးကိုထိသွားပြီး အွတ်ကနဲအသံထွက်သွားတော့..
ပရိပ်သတ်ကြီးရဲ့ အော်ဟစ်အားပေးသံတွေ ဝေါကနဲထွက်ပေါ်လာပြန်ပါတယ်…
ကြီးမိုက်အသက်ရှုမှားနေတုံး ဘလက်ချောက တဆက်ထဲဆက်တိုက်ဖိထိုးဖို့အတင်းဝင်တော့
ကြိုးဝိုင်းဒိုင် ပီချိုကြီးက ကြားဝင်တားထားလိုက်ပြီး ကြီးမိုက်ကို ဆက်ထိုးလို့ရမရ မျက်ရိပ်ပြမေးလိုက်ပါတယ်…ကြီးမိုက်က ခုံဆွဆွလုပ် အသက်ရှုမှန်အောင်ကြိုးစားရင်း
ဆက်ထိုးနိုင်ကြောင်း ခေါင်းဆတ်ပြပါတယ်..ဒီတော့မှ ပီချိုကြီးက လက်ကာထားတာလွှတ်လိုက်ပီး..ဆက်ထိုးစေလိုက်ပါတယ်…
ဆက်တိုက်ပစ်သွင်းနေတာ ကြီးမိုက် ခေါင်းတောင်မဖေါ်နိုင်အောင်ရှောင်တိမ်းနေရပါတယ်..
တစ်ချက်မှာတော့ ဘလက်ချော ခြေတဖက်ယိုင်ကနဲအဖြစ် အခွင့်ကောင်းကိုလက်လွှတ်မခံတဲ့
၀င်သွားပါတော့တယ်…ဘလက်ချော ဖင်ထိုင်ရက်ကျသွားပီး မူးနောက်သွားဟန်နဲ့
ခေါင်းခါနေပါတယ်…ချက်ချင်းပဲ ဂျော်နီအောင်ပုက ဘလက်ချောရှေ့မှာပိတ်ရပ်လိုက်ပီး…
`သုံး´…………….ပရိတ်သပ်ကြီးကလည်းတိတ်ဆိတ်သွားပီး ကိုအောင်ပု နံပါတ်စဉ်မှတ်သံနဲ့အတူ စိတ်လှုပ်ရှားစွာစောင့်ကြည့်နေကြပါတယ်..
ကိုအောင်ပုက နှစ်ဦးကြားရပ်နေရာကနေဖယ်လိုက်ပီး ပြန်စခွင့်ပြုလိုက်ပါတယ်…
ဒီတစ်ချီမှာတော့ နှစ်ယောက်လုံးလည်း အတော်မောနေကြပြီ..အချင်းချင်းလဲနဲနဲ
သဘောပေါက်သွားကြပီဆိုတော့ နှစ်ယောက်လုံး အတော်သတိထားပီး
ဘလက်ချောရဲ့ ဘယ်ဘက်ခြေဒူး နဲနဲကွေးပြီးအားယူလိုက်တာကြီးမိုက်တွေ့လိုက်တော့
ချက်ကောင်းစောင့်နေတဲ့ ကြီးမိုက်လည်း..သူ့ရဲ့ ပွဲသိမ်းတိုက်ကွက်ဖြစ်တဲ့
ဘလက်ချောရဲ့ ကွေးနေတဲ့ ဒူးပေါ်ကို ဖတ်ကနဲဘယ်ခြေဖျားနဲ့ခုန်တက်လိုက်ပီး
ချွေးတွေအဆီပြန်သလိုထွက်နေတဲ့ ဘလက်ချောဒူးခေါင်းဖျားမှာ ကြီးမိုက်ရဲ့ဘယ်ခြေဖျား
နဲနဲချော်သွားပီး ဟန်ချက်နဲနဲပျက်သွားတော့ သူတိုက်လိုက်တဲ့ ပွဲသိမ်းဒူးဟာလဲ
ဘလက်ချောကလဲ အချိန်မဆိုင်း…ဟန်ချက်ပျက် လယ်ထွက်သွားတဲ့ ကြီးမိုက်ရဲ့
ပီချိုကြီးက ချက်ချင်း ကြီးမိုက်လဲနေရာရှေ့ပိတ်ရပ်၊ လက်ကိုမြှောက်လိုက်ပြီး….
`ခုနစ်´……….. ကြီးမိုက် လဲနေရာက ထိုင်လိုက်ပီး လက်ထောင်ပြပါတယ်…
`ရှစ်´….. ဒိုင်ကအမှတ်မစဉ်ရေတာ မရပ်ပဲဆက်ရေပါတယ်
`ကိုး´….. ကြီးမိုက် ရုပ်ကနဲထရပ်လိုက်တော့…ပီချိုကြီး အမှတ်စဉ်ရေနေတာရပ်လိုက်ပြီး
ဆက်ထိုးလို့ဖြစ်ပါ့မလား ဆိုတဲ့အကြည့်နဲ့ ကြီးမိုက်ကိုကြည့်တော့…ကြီးမိုက်က
သတ်မှတ်အချိန် ၄၅ မိနစ်ကလည်းပြည့်ခါနီးလာပါပြီ….
ဒီတစ်ခေါက်ပြန်အစမှာတော့ နှစ်ယောက်လုံး သူတစ်ပြန် ကိုယ်တစ်ချက်နဲ့
အောင်ပွဲအဆုံးအဖြတ်အတွက် တရစပ် တိုက်စစ်ဆင်နေကြပါတယ်…ပရိတ်သပ်ကြီးလည်း
ရင်တမမနဲ့ အားပေးနေကြတာ အသံဗလံတောင်တိတ်ဆိပ်လို့နေပါတယ်…
“တွံတေး ဘလက်ချော”ရဲ့ ဟန်ရေးပြပုံ
တွံတေးဘလက်ချော နဲ့ တောင်လှေကားကြီးမိုက်တို့ ဘတပြန်ကျားတပြန်
ဒီတစ်ချီမှာတော့ နှစ်ယောက်လုံး ရှောင်ဖို့မကြိုးစားကြတော့ဘဲ အပြန်အလှန်ထိုးသတ်နေကြတာမို့ နှစ်ယောက်လုံးအထိနာကြပြီး…ယိုင်နေကြပါပြီ..
ဒီအချိန်မှာပဲ…အောက်က အမှတ်ပေးဒိုင် ကိုကြောင်ကြီးရဲ့ ခေါင်းလောင်းသံအကျယ်ကြီးထွက်ပေါ်လာလို့ ကြိုးဝိုင်းဒိုင် ပီချိုကြီးနဲ့မိုက်ကယ်ဂျော်နီအောင်ပုတို့…အပြင်းအထန် ထိုးသတ်နေသူနှစ်ဦးကြား
အတင်းဝင်ပီးဖြန်ဖြေ…တစ်ဦးစီကိုသက်ဆိုင်ရာ ကြိုးဝိုင်းထောင့်တွေကို တွန်းပို့လိုက်ကြပါတယ်
ကြီးမိုက်ဖက်ထောင့်က..ဦးမာဃ ရယ် အလင်းဆက်ရယ်..
လက်ဝှေ့ကျော်နှစ်ဦးကို လိုအပ်သလိုနှာနှပ် ပြုစုပေးနေကြပါတယ်…
တရဲရဲနဲ့ပါ… ကျန်းမာရေး(အရေးပေါ် သူနာပြု)တာဝန်ယူထားကြသူ..
ဒေါက်သီတာစိုး၊ အေကေကေအို၊ ကိုခင်ခ၊ ကိုထက်ဝေး၊ မိုချိုတို့ကလည်း ဆေးဝါးတွေနဲ့
ဘေးချင်းကပ်ထိုင်နေတဲ့ မဒမ်မိုက်နဲ့ မဒမ်ဘလက်တို့ နှစ်ယောက်
မျက်ရည်လည်ရွှဲ နှပ်တွဲလဲနဲ့ တစ်ဦးကိုတစ်ဦး ဖက်ပီးငိုနေကြလေရဲ့…
(သူတို့နှစ်ယောက်လုံး လင်တော်မောင်တွေကို ဒီလိုရန်ညှိုး ရန်စမရှိ အသေအကြေ
မထိုးသတ်ကြဖို့ အတန်တန် တားခဲ့ကြပေမဲ့ မအောင်မြင်ခဲ့ကြဘူးလေ..
အက်ဖ်အာ၊ ကြောင်ကြီး၊ ကိုရှုံး၊ ကိုရင်မောင်၊ ကိုကျောက်ခဲ၊ ကိုအဏ်ဏ၀ါ တို့
ဒိုင်ပွဲရပ်လို ဘယ်သူကမှ အလဲမထိုးနိုင်ခဲ့တော့…အမှတ်နဲ့ပဲဆုံးဖြတ်ရမဲ့သဘောပါ…
ကြိုးဝိုင်းဒိုင်တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ မိုက်ကယ်ဂျော်နီအောင်ပု က အောက်က အမှတ်ပေးဒိုင်ချုပ်
ကိုအက်ဖ်အာကြီး ပေးတဲ့ ရီဇတ်စာရွက်ကိုလှမ်းယူလိုက်တာတွေ့ရပါတယ်……
လက်တစ်ဖက်စီကိုင်လို့ ဂျော်နီအောင်ပုရဲ့ ကြေငြာသံကိုနားစွင့်နေပါတယ်..
ပရိတ်သပ်ကြီးကလည်း စိတ်ဝင်စားလွန်းလို့ တိတ်ဆိတ်နေလိုက်တာ…
အခု အမှတ်ပေးဒိုင်သူကြီးများရဲ့ အမှတ်တွေပေါင်းခြင်းအရ…(တော်တော်လေးငြိမ်နေပါတယ်)
ဒီကနေ့ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ မြန်မာ့ရိုးရာ လက်ဝှေ့ ချံပီယံဗိုလ်လုပွဲကြီးမှာ
အနိုင်ရသွားသူကတော့….” ဒီနေရာမှာဆက်မပြောပဲ…ကိုအောင်ပုက…ပရိတ်သပ်ကိုတစ်ပါတ် ဝေ့ကြည့်နေပါတယ်….
“မြန်မြန်ပြောပါတော့ဗျို့”…ပရိတ်သပ်ကြီးစိတ်မရှည်လို့အော်ကြ ဆဲကြနဲ့ ဆူညံသွားပါတယ်……အဲတော့မှ..မိုက်ကယ်ဂျော်နီအောင်ပုက…ဆက်ပီး
“အမှတ်တူနဲ့ ပူးတွဲချံပီယံ သတ်မှတ်လိုက်ပါတယ်ဗျား..”ကိုအောင်ပုအသံလည်းဆုံးရော…
ပီချိုကြီးကလည်းချက်ချင်း ပြိုင်ဘက်နှစ်ဦးလုံးလက်ကို ပျော်ရွှင်စွာမြှောက်လိုက်ပါတော့တယ်..
အခမ်းအနားမှုး ရွှေတိုက်စိုးအသံ ရုတ်တရက် ထွက်ပေါ်လာပါတယ်…..
၂၀၁၃ခုနှစ်ရဲ့ ဒုတိယမြောက်လဖြစ်တဲ့ ဖေဖေါ်ဝါရီလ အတွက် မန်းဂဇက်ချစ်သူများစာပေဆု
ရရှိသူကို…ဖတ်ရွေးအဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌ မင်းသမီး မပဒုမ္မာကနေကျြေငြာပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်…”
(ပထမ ၆လ အတွက် ဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ယူခဲ့တဲ့ ဦးဦးပါလေရာ ကလည်းစိတ်ဝင်တစားကြည့်လို့နေပါတယ်)
ဖတ်ရွေးအဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌ မင်းသမီး မပဒုမ္မာကြေငြာပြီးတာနဲ့…ထမင်းစားမဏ္ဍတ် မှာ
အလှူ့ရှင် ဦးဦးပါလေရာနဲ့ ကိုဆာမိတို့ လှူဒါန်းတဲ့ ၀ါဆိုထမင်းကိုသုံးဆောင်ကြပါ
မင်းသမီးလဲဖြစ်..လက်ရှိဖတ်ရွေးဥက္ကဋ္ဌလည်းဖြစ်တဲ့ မပဒုမ္မာ စင်ပေါ်တက်လာပါတယ်…
“လေးစားရပါသော သဂျီးမင်းနဲ့တကွ ရွာသူရွာသားအပေါင်း မင်္ဂလာပါရှင့် ဟ ဟ ဟ ဟတ်ချိုး…ဟတ်..ဟတ်..ဟတ်..ဟတ်ချိုး…အော်အရေးထဲ….(လက်ကိုင်ပုဝါနဲ့
၂၀၁၃ ဖေဖော်ဝါရီ အတွက် မန်းဂဇက်မှာ တက်လာခဲ့တဲ့ ပို့စ်ပေါင်းဟာ
ကျမတို့ ဖတ်ရွေးအဖွဲ့ကြီးရဲ့ အတွင်းရေးမှုး မဟာရာဇာခြောက်မျက်နှာရဲ့..
`ယနေ့ပို့စ် ´အရ စုစုပေါင်း..(၃၈၃) ပုဒ် တက်လာခဲ့ပါတယ်ရှင် ….။
စာရေးကြသူတွေ ကလည်း နည်းနည်းနောနော မဟုတ်ဘူးရယ် …
(၁၂၁) ယောက် တောင်မှ ရှိပါတယ်…
အသစ်ရော၊ အဟောင်းရောပဲ …။ အရင် မရေးတာကြာတဲ့ လူဟောင်း အချို့လည်း ပြန်ဝင်ရေးကြတာ တွေ့ရတဲ့အတွက် အထူးပဲ ၀မ်းသာမိပါတယ်… ဟတ်..ဟတ်..ဟတ်..ဟတ်ချိုး…အော်..ဒုက္ခပါပဲ…မဖြစ်တော့ပါဘူး….
အဲ…ကျန်းမာရေးက နဲနဲ ဖေါက်နေလို့ ပရိပ်သတ်ကြီး ခွေးလွှတ်ကြပါ…
ဆက်ကြေငြာရမဲ့ ကိစ္စကို…ခုလေးတင် လက်ဝှေ့ ထိုးလာခဲ့တဲ့..တောင်လှေကားကြီးမိုက်
ကြီးမိုက် ကယိမ်း ကယိုင်နဲ့ တက်လာပါတယ်..အား..ကျွတ်..ကျွတ်…ကျွတ်
မျက်လုံးနှစ်ဖက်ကလည်း ပိတ်လုလုနဲ့ ဖူးယောင်လို့ပါ…အဟမ်း..အဟမ်း..
လူတကိုယ်လုံး ကိုင်ရိုက်ထားသလို နာနေတဲ့ကြားက ကြိုးစားပီး ကြေငြာပေးပါ့မယ်..
ဥက္ကဋ္ဌကြီး ဒေါ်ပဒုမ္မာ ပြောသွားသလိုပါပဲ…..
အဲဒီ စာရေးသူ ၁၂၁ယောက်ရဲ့ ပို့စ် ၃၈၃ ပုဒ် ထဲကမှ ၂၀၁၃ ဖေဖော်ဝါရီ အတွက်
ဇကာတင်ရွေးချယ်ခံရတဲ့ ပို့စ်တွေကတော့……စုစုပေါင်း (၂၇)ပုဒ် တောင်ရှိခဲ့ပါတယ်..ဒါကိုကြည့်ရင်…
ဖတ်ရွေးအဖွဲ့ဝင်တွေ အကြိုက် သိပ်မတူကြတာပေါ်လွင်ပါတယ်…အဲဒီပို့စ်တွေကတော့…
၁။ သမီးလေးရေ… johnnydeer
၂။ “မြေပဲပြုတ်၊ မုန့်ဖက်ထုပ်၊ ပြောင်းဖူးပြုတ်´´ ခင်ခ
၃။ မသုံးသင့် သော Android ဆော့ဝ် များ Mobile House http://myanmargazette.net/165912/
၄။ မကျွေးနိုင်ရင် မမွေးကြပါနဲ့ အာဂ
၅။ အီစီကလီ အမျိုးသားကြောင့် အိမ်သူသက်ထား ဂုဏ်မငယ်စေလို TheWinner http://myanmargazette.net/167345/
၆။ ဖိုးကြား၊ မိုမို နှင့် ဆြာအုပ် ဂန္ဓာရီ ဆြာအုပ်
၇။ ရခိုင်ပြည်နယ်သို့တစ်ခေါက် P chogyi
၈။ ရေဆန်လမ်းမှ ပန်းတစ်ပွင့် ( ၁ ) Myo Thant https://myanmargazette.net/166421/creative-writing
၉။ ကျွန်တော် မကောင်းဘူး… johnnydeer
၁၀။ ဂျာနယ်တစ်စောင် ထုတ်ဝေခြင်း Kyaw Nyo Thway http://myanmargazette.net/166439/mandalay-gazette-2/editors-choice
၁၁။ သွားဖြီးပြတဲ့ နွားနဲ့တဲနန်းရှင်ရဲ့ ဗေဒင် တောတွင်းပျော် https://myanmargazette.net/166397
၁၂။ ကြီးမိုက်ပေါ်သူတို့အမြင်-Their View Kyeemite http://myanmargazette.net/167588/creative-writing
၁၃။ လူစိတ်ပေါက်လို့တာဝန်ယူတတ်ပါစေ etone
၁၄။ ကျနော်နဲ့သူမ သစ်ဆန်းခန့်
၁၅။ ကျမအလုပ်ရှူပ်နေတယ်မောင် Wow
၁၆။ အိုဘယ့်လောကဓံ ရဲစည်
၁၇။ လက်ဖက်ရည်သောက်ခြင်းအနုပညာ niki ta http://myanmargazette.net/167923/uncategorized-other/copypaste
၁၈။ လမ်း၌ယဉ်ကျေးမှု(၃)။ အမှိုက် ၁၊၂၊၃ -Disposal Padonmar http://myanmargazette.net/167413/creative-writing
၁၉။ “လူငယ်တစ်ရောက်ရဲ့ ထပ်ဆင့်အတွေးများ” ရင် နင့် အောင် http://myanmargazette.net/168140/creative-writing/drama-essays-humor-memoirs-novel-excerpts-short-stories
၂၀။ (၁၀)တန်းဖြေမည့် လူငယ်များနှင့် မိဘများအတွက် asiamasters http://myanmargazette.net/167950/arts-humanities/burmese-myanmar-asian-culture-mythology-folklore
၂၁။ “အတိတ်က….အမှတ်တရ” aye.kk
၂၂။ “လက်ရှိဘ၀ထက် မြင့်မြတ်တာ ဘာဆိုဘာမှ မဖြစ်နိုင်ပါ TheWinner http://myanmargazette.net/166614/creative-writing/my-dear-diary
၂၃။ ကျမ..ချစ်သောတောင်ပေါ်မြို့ လေးရဲ့ မွေးနေ့ပွဲ Traditional Medicine http://myanmargazette.net/166248/uncategorized-other/copypaste
၂၄။ Copyright Issues Again II အင်ဇာဂီ http://myanmargazette.net/164888/business-economy
၂၅။ ယဉ်ကျေးမှု အမွေ Mr. MarGa
၂၆။ သံသရာလမ်းမအလယ်… မဂ္ဂင်ဖောင်ကြီးစီးလို့ ကြောင်ဝတုတ် http://myanmargazette.net/167571/creative-writing
၂၇။ ဪ…အနိစ္စ…. အ နိပ် စ ဦးကျောက်
ပို့စ် ၂၇ ခု ဖြစ်ပေမယ့် စာရေးသူ (၂၄) ဦး ဇကာတင်စာရင်းမှာ ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။
ဒီလ (၂၀၁၃၊ဖေဖေါ်ဝါရီလ) မန်းဂဇက်ချစ်သူများ စာပေဆုရွေးချယ်ရာမှာ
ဖတ်ရွေးအဖွဲ့ဝင်တွေ အကြိုက် သိပ်တထပ်တည်းမကျလို့ ဇကာတင်ပို့စ်တွေ
များနေတာ အားလုံးသိတော်မူကြတဲ့ အတိုင်းပါပဲ…..အဲဒီထဲကမှ…အမှတ်
ရွာထဲကိုရောက်တာမကြာသေးပေမဲ့ ရေးလိုက်တဲ့ပို့စ်တိုင်း အင်မတန် ဖတ်ကောင်းအောင်
အရေးအသားကောင်းကောင်းနဲ့ ရေးနိုင်တဲ့…. ရေဆန်လမ်းမှ ပန်းတစ်ပွင့် ( ၁ ) ရေးသူ
ကို မျိုးသန့် ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျား……….
ဖေဖေါ်ဝါရီလအတွက် အမှတ်ရရှိမှု့ ဇယားလေးပါ..
ကြီးမိုက်ဆိုတဲ့ကောင်ကတော့ ..မရေးတတ် ရေးတတ်နဲ့ တတ်သလောက်တော့လုပ်ချလိုက်ပြီ
သည်းခံပြီးဖတ်ရှုကြပါလေကုန်လော့….အမှားပါကလည်း ခွေးလွှတ်၍ ထောက်ပြကြပါကုန်…
ဓါတ်ပုံများကို ဂူးဂဲ အင်းမိတ် မှရယူပါသည်။
ရွှီးး ဖြောင်းးး ဖြောင်းးး ဖြောင်းးးးးးး ယောက်ခမဂျီးကွးးး ကောင်းကောင်းအဖေမို့ ဒီလောက်တော်တာ:mrgreen:းကိုင်း ကိုင်းး ချွေးမလေးက စားဖို့ သွားကြားထိုးပြီးပြီနေားး အများကြီး ဂုဏ်ယူဝမ်းသာပါကြောင်း ကောင်းကောင်းကိုလည်း လွမ်းပါကြောင်း သတိရပါကြောင်း (ဘာမှလည်းဆိုင်ဘူး )
ပို့စ်ထဲမှာ ကျွန်တော့်လို အသားမည်းကို ထည့်ရေးပေးလို့ ၀မ်းသာသွားပါတယ်…။
ပို့စ်ထဲမှာ ဖေါ်ပြထားတဲ့ ဘလက်ချောပုံက အပြင်ကဘလက်ချော လောက် အသားမမည်းတာမို့ စိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါတယ်…။
ခင်ဗျားကို သနားလို့ ကျုပ်လျှော့ထိုးလိုက်တာပါနော…
ခင်ဗျားပြောမှပဲ ရီပလိုင်းဆိုတာနှိပ်ပီး တစ်ဦးချင်းစာပြန်ရမှန်း သိသွားတယ်
ဈေးရောင်းပွဲ အတွက်ချက်ပြုတ် ကြော်လှော် နေရတာနဲ့ပဲ အလုပ်များနေလို့
လက်ဝှေ့ပွဲ မကြည့်လိုက်ရသလို အခြားသောပွဲတွေလဲ လွတ်ကုန်ခဲ့တယ်…
အငြိမ့်ကြည့်ပြီးမှဘဲ ရေဆန်လမ်း ပြန်ဖတ်လိုက်ဦးမယ်…
ဆုကြေငြာပုံဆန်းလေးတွေလဲ တစ်မျိုးစီ ကောင်းကြလို့
နောက်လ အလှည့်ဘယ်သူကဘယ်လိုရေးမလဲ စောင့်ဖတ်ပါဦးမည်….
အရင်ဆုံး အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ ပြောပါရစေ ၊
စာရေးစေတတ်ခဲ့တဲ့ အမေ့ရဲ့ သွေး
ကဗျာရေးစေတတ်ခဲ့တဲ့ အဖေ့ရဲ့ သွေး
ဒီသွေးတွေလှည့်ပတ်စီးဆင်းနေတဲ့ ကျနော့်အတွက် ရင်ဖွင့်စရာ ဂဇက်ရွာ
ဒါတွေဟာ မေ့နိူင်စရာမှ မဟုတ်တာ ၊
ဇန်နဝါရီ ၂၂ ရွာသားဖြစ်ချိန်က စလို့ စကားလုံးတွေနဲ့ ရင်းနှီးခဲ့ရသူတွေဟာလည်း ဘဝမှာ အမှတ်တရပါ ၊
ရွာသားဖြစ်ပြီး ၁၄ – ၅ ရက်အတွင်းမှာပဲ ယောက်ခမ အခေါ်ခံရတာကလည်း ထူးခြားလှပါရဲ့းP
ရွာသူရွာသားတွေနဲ့ ဆုံရမယ့်ရက်မှာ သားလေးနဲ့ မရောက်ရောက်အောင် လာပါ့မယ်ဗျာ ၊
( ကချင်ပြည်နယ်မှာမွေးဖွား လှည်းတန်းနဲ့မဝေးကွာ ပြည်ရိပ်မွန်မှာ နေပါသည် ၊ )
ဆုရတဲ့ ယောက်ခမဂျီး (သများခေါ်လို့ လိုက်ခေါ်တာ ..ဟိ) ဗရာဘို :harr:
ဒီလ ဖတ်ရွေးနားဖို့ ခွင့်တင်ထားလို့ မရွေးလိုက်ရပေမယ့် …
ကိုယ်တိုင်ရွေးရင်လည်း အဲဒီပိုစ့်ကိုပဲ ရွေးဖြစ်မှာ။
ဒီလပိုစ့်ကောင်းတွေ များလွန်းလို့ ဖတ်ရွေးတွေ ရွေးရခက်ကြီး ဖြစ်သွားကြမယ်ထင်တယ်။ :hee:
ဦးဦးမျိုးသန့်ရေ….Congratulations ဗျို့။
ကကြီးမိုက် ရဲ့ လက်ဝှေ့ပွဲမှာ သရဖူဆောင်း အနိုင်ရသူ ကိုမျိုးသန့် နဲ့ ဆကာတင်ပါသူ များသာမက စာရေးသူ အားလုံး ကို လေးစားဂုဏ်ယူပါတယ်။
ကျွန်မလဲ အပြင်မှာ လက်သီးထိုး နေရတာမို့ အလဲထိုးမခံရလေအောင် အပြင်းအထန် လေကျင့်/ ကာကွယ်နေရတာကြောင့် ရွာထဲ မှာ ပျောက်နေရင် သတိရပေးကြပါနော်။
လောကကြိုးဝိုင်းမှာ လောကဓံကို အလဲထိုးအနိုင်ယူနိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးပါတယ်။
အရီးလတ်ဆိုတဲ့ အရီးဟာ ရွာထဲမှာ နှစ်ယောက်မရှိတာမို့ …..
မပြောပေမယ့်လည်း သတိတရရှိကြတယ်ဆိုတာ …..။
ကွန်မန့်လေးတွေနဲ့ ၀င်ရောက်အားပေးချီးမြှင့် သူများအားလုံးကို
တောင်လှေကားကြီးမိုက်က ကျေးဇူး အထူးတင်ကြောင်းပါဗျာ… :hee:
ဆုရသွားသူ ကိုမျိုးသန့်ဟာ စာရေးအင်မတန်ကောင်းပါတယ်…
အဲဒီလိုစာရေးကောင်းသူတွေ ရွာထဲတိုးလာလို့ ၀မ်းမြောက်မိကြောင်းပါ….
ကိုခင်လတ်ကြီး ..ဘ၀တိုက်ပွဲ အနိုင်နွဲဖို့ရယ်၊ အလဲထိုးမခံရလေအောင် အပြင်းအထန် လေကျင့်/ ကာကွယ်နေလို့ မအားတဲ့ကြားက အချိန်ပေးပြီး ၀င်ရောက်အားပေးလို့ အားတက်မိပါဂျောင်းးးးးးး
မမ ဆုတောင်းသလိုပဲ ကူးချဆုတောင်းပေးပါရစေ..“လောကကြိုးဝိုင်းမှာ လောကဓံကို အလဲထိုးအနိုင်ယူနိုင်ပါစေလို့ ” :hee:
မမ ရေ..ဟုတ်တယ်ဗျာ…ဒီလ ရွေးချယ်မှု့တွေ တော်တော်ပြန့်သွားတယ်…
ဒီကြေငြာတဲ့ပို့စ်အတွက်တော့ အတော်ခေါင်းစား၊ အချိန်ပေး အားထုတ်လိုက်ရပါဂျောင်းးးး
ကိုမျိုးသန့်ရေ နှင့် ဇကာတင်စာရင်းဝင်သူများ အားလုံး .. congratulation ပါ ဗျို့ ။
တင်ဆက်သူ တောင်လှေကားဦးကြီးမိုက် နဲ့ အလံ မလှဲ တဲ့ ဖတ်ရွေး အဖွဲ့ကြီးကိုလည်း ဘရာဗိုပါဗျာ ..
ဦးမိုက်ရေ မင်္ဂလာပါရှင့် ။
ရေးတတ်လိုက်တာ ..တချို့တလေတွေ မျက်နှာလည်း မြင်ဖူးထားတော့ ၊ ရေးထားတဲ့ နေရာနဲ့ တွဲ တွဲ ပြီး မြင်ယောင်လို့ .. ရယ်လိုက်ရတာ တခွိခွိပဲ ဒါနဲ့ .. လက်ဝှေ့ ပွဲ စရင် ညက်မှန် ချွတ်ကြဖို့ တတိမမေ့နဲ့ အူးနော် …. ။ ဒိုင်လူရီးတွေ မွှား အထိုးခံရမှာ စိုးလို့ ဘာာာ ။
Congratulation ပါ ယောက္ခမဂျီး …………… ၀မ်းသာပါအိ ……. ဟီး (ချွေအိ အူးလို့ ဖစ်ဘူးပဲ …သူက ညင်သမျှ ညက်ချောင်းထိုးနေဒါ …. ခိခိ .. )
လက်ဝှေ့ပွဲမှာ မတိမ်းမစောင်း ဘိမ်းမောင်းနဲ့ အားပေးရင်း ဟိုင်း.. ရော့..
ဆုရတဲ့ ကိုမျိုးသန့်လည်း ကွန်ကရက်ကျူလေးရှင်းပါ..
သူလည်း လောလောဆယ်မှ ရွာမှာ ၀င်ရေးတာပေမယ့် ရေးအားရှိတယ်
ဆုရသူ ကိုမျိုးသန့်ရေ ကွန်ကရက်ကျူလေးရှင်းပါဗျို့။
present လုပ်သွားတဲ့ကိုမိုက်ရော ၊ ဆုရသူများရော ၊ ပိုစ့်ရေးတဲ့သူတွေရော ၊ ဖတ်တဲ့သူတွေရော၊ ရွာသူားတွေအားလုံး လူတော်ကြီးတွေပါပဲဆိုတာ ပြလိုက်နိုင်တာ ပါပဲ။
ကျုပ်တော့ ဒီနေ့မှ ဒီထဲ ၀င်ဖတ်လိုက်တာ…နှစ်ပို့စ်တောင် ၀င်တယ်ဆိုတော့ ၀မ်းသာထှာဗျာ…ဇကာထဲ ၀င်ဝင်…ဇကောထဲဝင်ဝင် ဘယ်ထဲဝင်ဝင် ပျော်တယ်ဗျို့…ဖတ်ချင်သူရှိရှိ မရှိရှိ လက်ညောင်းခံရေးလိုက်ဦးမယ် နောက်ထပ်ပို့စ်တွေ…
အခုလို ကြားရတဲ့အသံတွေက ဖတ်ရွေးတွေအတွက် တကယ့်အားဆေးပါပဲ။ :hee:
လက်ဝှေ့ပွဲမှာ မတိမ်းမစောင်း ဘိမ်းမောင်းနဲ့ အားပေးတီးပေးခဲ့တဲ့..ရွာစားကျော်မင်းနန္ဓာ ကို
etoneရေ..ဒိုင်လူဂျီးတွေကို မှားထိုးတာမဟုတ်..တမင်ကိုဒဲ့ထိုးချင်နေတာ..နာ့ကိုအနိုင်မပေးလို့.. :harr:
ကျုပ်ကိုဆေးဝါးကုသပေးတဲ့ ဒေါက်တာAKKO ကိုလည်းကျေးဇူးနော..
“ဇကောထဲဝင်ဝင် ဘယ်ထဲဝင်ဝင် ပျော်တယ်ဗျို့…ဖတ်ချင်သူရှိရှိ မရှိရှိ လက်ညောင်းခံရေးလိုက်ဦးမယ် နောက်ထပ်ပို့စ်တွေ…”
ရေးပါ..ရေးပါ..ကျနော်ဆို ခင်ဗျားရေးတဲ့ “ကျနော်မကောင်းဘူး”ဆိုတဲ့ပို့စ်သိပ်ကြိုက်ပေါ့..
အမှတ်ဇယားလေးက စောင်းစောင်းလေးဆိုတော့ ဇကာတင်တွေ ကိုယ်ပါမှန်းမသိကြသေးဘူးထင်တယ်။
နောက်ပြီး မှတ်ချက်ကလေးတွေ ဝေေ၀့လို အိမ်တိုင်ယာရောက်ပို့ပေးနိုင်ရင် ၀မ်းသာကြမယ်ထင်ပါတယ်။
ဦးမိုက် ရဲ့ လက်ဝှေ့ပွဲကြီး ကို အားနာလို့ မောင်အံကများ အဲဒီတာဝန်လေး ယူပေးနိုင်ရင် အတော်ကောင်းမှာပဲ။
စီပီး ဖေါ်ပြထားတယ်လေ….ဒါပေမဲ့ ကိစ္စမရှိပါဘူး…
ဥက္ကဋ္ဌဂျီး ပြောသလို “မှတ်ချက်ကလေးတွေ ဝေေ၀့လို အိမ်တိုင်ယာရောက်ပို့ပေးဖို့”
အတွင်းရေးမှုး အံစာတုံးကို မေးပို့ပြီးအကူအညီတောင်းထားပါဂျောင်းးးး
လက်ဝှေ့ ဒဏ်ကြောင့် နလံမထူနိုင်သေးတဲ့
အတုန် လိုက်လံ ဖိတ်ကြားပီးဘာဂျောင်း …
ဖိတ်ခ ပေးဘာ ….
ဆုရသွားသူ ကိုမျိုးသန့် ကို ဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက်ကြောင်းပြောပါရဇေ….
ဇကာတင်ဝင်တဲ့စာမျိူးတော့ ထပ်မရေးလိုတော့ပါ… တစ်ခါရေးရင် ရင်အတော်နာလို့ပါ…
အော်… အခုတစ် ဇတ်တွေဆက်တိုက်နာနေပါဒယ်ဆို….
ထုံးစံအတိုင်း.. ဂဇက်ကွန်ဖရင့်ကျရင်.. ဆုရတာတွေအထဲက.. တပုဒ်ကိုပုံနှိပ်ဖေါ်ပြဖို့ရွေးပါမယ်နော…
ခုတလော… Satire အရေးကောင်းတဲ့ ကာလသားခေါင်း.. အဲ.. ကာလသားဖင်တွေကိုတော့.. ဆွစ်လုပ်ချောကလက်ထဲ.. ဗမာမိုးမျှော်ငရုပ်သီးမြုပ်ထည့် .. ဆွစ်-ဗမာချစ်ကြည်ရေးစတုဒီတာလုပ်မလားတွေးနေပါကြောင်း..။
သူကြီး… ရန်မစနဲ့နော်… ခိခိ
၀မ်းသာပါတယ်ကိုကြီး မျိုးသန့်ရေ ထပ်တူထပ်မျှ ပါဗျာ။